22 Maarso: Maalinta Caalamiga ee Biyaha | Radio Himilo
Home / Deegaan / 22 Maarso: Maalinta Caalamiga ee Biyaha
Posted by: Mahad Mohamed March 22, 2020
Himilo – 22 bisha Maarso sannad kasta waxaa dunida laga xusaa Maalinta Caalamiga ah ee Biyaha. Ujeeddadu waa in la xaddidaa mushkiladaha biyaha ku foolan. Maanta, 1.8 bilyan oo dad ah ayaa adeegsada ama isticmaala biyo aan sugneyn, taas oo ku sababeysa inay ku dhacaan cudurrada Koleeraha, Daacuun-caloolaha, Tiifowga iyo Booliyada.
Si kale marka la yiraahdo, ujeedada maanlintan waa in is-baddel loo sameeyo xubnaha katirsan bulshooyinka dunida ee la dhibban xaaladaha la xiriira biyaha. Waa maalin loo diyaar-garoobo sida ugu maangalsan ee mustaqbalka loo maareyn karo biyaha. Sanadkii 1993, kal-fadhiga guud ee QM ayaa 22 Maarso u asteeyey Maalinta Caalamiga ee Biyaha.
Maanta, waxaa jira in ka badan 663 Milyan oo qof oo si maalinle ugu nool ilo-biyood aan ku filneyn baahidooda; kuwaas oo waqti aan xisaab laheyn saf ugu jira helidda biyo nadiif ah iyaga oo foggaan dheer uga soo baqoolaya. Waxase kasii daran biyaha ay darsadaan, waxay ka qaadaan cudurrada ka dhashay biya-fadhiisadka.
In diiradda la saaro biyaha lagu israafo ee badi laga arko guryaha caadiga ah, masaajidda, warshadaha, dugsiyada waxbarashada iyo wixii soo raaca waxay na xusuusineysaa sida aan u lumineyno kheyraad mudnaa in mar iyo marar badan dib loo adeegsado.
Guud ahaan, 80% biyaha lagu takri-falo waxay iskaga dhammaadaan arlada iyaga oo aan dib loo adeegsan. Soomaalidu waxay kamid taahy bulshooyinka aad ugu takri-fala kheyraadka biyaha.
Tusaale ahaan, biyaha ku shubma bullaacadaha masaajidda ee lagu weysa-qaato waxaa la awoodi karaa in laga faa’iideysto mar kale iyada oo siyaalo kale loo marayo sida in geedaha lagu waraabsado ama xooluhu ay cabaan. Marka aad ogaato in masjidkiiba uu maalintii isticmaalo biyo dhan 5,000 litir, midkeenna usii kuur-gala wuxuu awoodaa inuu ka faa’iideeyo kheyraadkaasi ku dhammaada ciidda.
Si kale, biyaha roobka ee jidadkeenna ka dhigay mar kasta oo ay da’aan dhiiqo iyo uskag; waxaa la awoodaa in loo keydsado isticmaal hore – iyada oo hakad la gelinayo biyaha tubooyinka.
Haddii sida ugu habboon loo dhaqan-geliyo murtida Soomaaliyeed ee tiraahda: Biyo dhul lagu arag, lagana dhowr, waxaan awoodi karnaa inaan si simman uga dheefsanno ilo biyoodyadeenna. Waxaana taasi ay nagu caawin kartaa inaan xal u helno biyo la’aanta ay la harraadsan yihiin dadka iyo duunyada u aafowda abaaraha soo noq-noqda.
Previous: Luka Jovic oo loo bandhigayo Chelsea iyo Tottenham
Next: Liverpool oo heshiisyo cusub ka saxiixaysa Alisson iyo Van Dijk